စကားဝှက်စီမံခန့်ခွဲသူ - GNU / Linux အတွက်ဘယ်တွေရနိုင်မလဲ။ | Linux မှ
စကားဝှက်စီမံခန့်ခွဲသူများ - GNU / Linux အတွက်မည်သည့်အရာများရရှိနိုင်သနည်း။
မနေ့ကကတည်းကကျနော်တို့ကြေညာခဲ့သည် လတ်တလောသတင်းများ ၏ရရှိမှု၏ ပထမ ဦး ဆုံးတည်ငြိမ်သောဗားရှင်း GNU / Linux del အတွက်ဖြစ်သည် စကားဝှက်မန်နေဂျာ ကိုခေါ် 1Password, လူကြိုက်များသောလက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုများနှင့်နီးပါးနီးပါးပေါင်းစပ်ပေးသောယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤinရိယာရှိလက်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းများအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြန်လည်သုံးသပ်မည်။ "စကားဝှက်မန်နေဂျာများ".
ဒီအတွက်ကျနော်တို့နှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြလိမ့်မည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းကဲ့သို့ ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပိတ်ထားသောမဖြစ်စေ၊ အခမဲ့သို့မဟုတ်ပေးဆောင်.
ထိုအချိန်မှစ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်နှင့်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးထုတ်ဝေခြင်းမဟုတ်ပါ "စကားဝှက်မန်နေဂျာများ" ရရှိနိုင်ပါသည် GNU / Linux Distrosပုံမှန်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်စာပေအချို့မှအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်အချို့ကိုချန်ထားလိမ့်မည်။
"KeePass က Cross-platform password manager de open source ဖြစ်ပြီးသင်၏အကောင့်များအားလုံးကိုလုံလုံခြုံခြုံစုစည်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်သင်၏စကားဝှက်အားလုံးကိုဖိုင်တစ်ခုတည်းတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ၎င်းအားဖြင့်ကာကွယ်လိမ့်မည် AES y နှစ်ယောက်ဒေတာလုံခြုံရေးပြissuesနာများအတွက်အခိုင်မာဆုံး encryption နှင့် encryption ကို algorithms နှစ်ခု။" KeePass - စကားဝှက်တွေကိုလုံလုံခြုံခြုံနဲ့လွတ်လပ်စွာစီမံပါ.
သင်ကြိုးစားသင့်သောအကောင်းဆုံး open source password manager ကို Bitwarden
Buttercup - ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော cross-platform password manager
KeePass - စကားဝှက်တွေကိုလုံလုံခြုံခြုံနဲ့လွတ်လပ်စွာစီမံပါ။
KeePassX 0.4.3 - စကားဝှက်အားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းမှာပဲ
LessPass - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်စကားဝှက်မန်နေဂျာဖြစ်တယ်
1 စကားဝှက်၊ Linux ကိုစဉ်းစားသောစကားဝှက်မန်နေဂျာ
1 စကားဝှက်မန်နေဂျာများ - အခမဲ့၊ ပွင့်လင်း။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
1.1 Password Managers ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 ဘယ် GNU / Linux အတွက်ရနိုင်မလဲ။
စကားဝှက်မန်နေဂျာများ - အခမဲ့၊ ပွင့်လင်း။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Password Managers ဆိုတာဘာလဲ။
ဟုခေါ်တွင်လူသိများပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဝက်ဘ်ဆိုက်၏ထုတ်ဝေအဆိုအရ အင်တာနက်အသုံးပြုသူလုံခြုံရေးရုံးအဆိုပါ "စကားဝှက်မန်နေဂျာများ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်:
"ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များ (အသုံးပြုသူများ၊ စကားဝှက်များ၊ ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစသဖြင့်) ကိုသိမ်းဆည်းရန်အသုံးချပရိုဂရမ်များသည်“ master” စကားဝှက်ဖြင့်စာဝှက်ထားသောဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသူအကောင့်အားလုံးကို tool တစ်ခုတည်းမှစီမံပြီး master password တစ်ခုတည်းကိုသာမှတ်သားနိုင်သည်။" စကားဝှက်မန်နေဂျာများ - သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ဘယ် GNU / Linux အတွက်ရနိုင်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်မှုမှရရှိနိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများမှ GNU / Linux များ ဒီရိယာထဲမှာကျနော်တို့အောက်ပါအောင်မြင်ပါပြီ ထိပ်တန်း 10 အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:
၎င်းသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာစီမံခန့်ခွဲရန်အလွန်အမင်းတောင်းဆိုမှုမြင့်မားသောသူများအတွက်အကောင်းဆုံး application ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပေါ့ပါးသောမျက်နှာပြင်ရှိပြီး Cross-platform တစ်ခုဖြစ်ပြီး GNU General Public License ၏စည်းမျဉ်းများအရထုတ်ပြန်သည်။ ၎င်းသည်ခိုင်မာသောစကားဝှက်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သေးငယ်သည့်အသုံးအဆောင်တစ်ခုပေးထားသည်။ Password Generator သည်အလွန်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော၊ မြန်ဆန်။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် 256-bit key ကို အသုံးပြု၍ AES (alias Rijndael) သို့မဟုတ် Twofish encryption algorithm ဖြင့်အမြဲစာဝှက်သည့် Database တစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည် Multiplatform ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သော version ကို ၁၀/၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ။ ကြည့်ရှုခြင်း GitHub.
'KeePass Password Safe
၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် (OSI အသိအမှတ်ပြုထားသော) စကားဝှက်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကို၎င်းတို့၏စကားဝှက်များကိုလုံခြုံစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်စေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စကားဝှက်အားလုံးကိုဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုအတွင်းသိုလှောင်သည်။ ၎င်းသည်မာစတာသော့နှင့်သော့ခတ်ပြီးသော့ဖွင့်ထားသည်။ ဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်များကိုလတ်တလောလူသိများသောအကောင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးစာဝှက်စနစ် (AES-256, ChaCha20 နှင့် Twofish) ကို အသုံးပြု၍ စာဝှက်ထားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် Multiplatform ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သော version ကို 05/2021 ရက်စွဲပါ။ ကြည့်ရှုခြင်း SourceForge.
၎င်းသည် AES-256 စာဝှက်စနစ် algorithms ဒေတာဘေ့စ်အတွင်းရှိသုံးစွဲသူများ၏အရေးကြီးသောဆိုဒ်များ၏အကောင့်များ၏စကားဝှက်များကိုသိမ်းဆည်းပြီးစီမံခန့်ခွဲသောခေတ်မီ။ လုံခြုံပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စကားဝှက်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာစီမံခန့်ခွဲရန်အလွန်မြင့်မားသောတောင်းဆိုမှုများရှိသောအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူမှသတ်မှတ်ထားသောခေါင်းစဉ်များနှင့်အိုင်ကွန်များဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်၎င်းကိုစိတ်ကြိုက်အုပ်စုများအဖြစ်ခွဲခြားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် built-in search function ပါဝင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် Multiplatform ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သော version ကို 01/2021 ရက်စွဲပါ။ ကြည့်ရှုခြင်း GitHub.
၎င်းသည် Typecript နှင့် NodeJS တွင်တည်ဆောက်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စကားဝှက်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် vault ဖိုင်များ (.bcup) အတွင်း၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေလျှက်ရှိစကားဝှက်နှင့်အထောက်အထားများကိုကာကွယ်ရန်ခိုင်မာသောစက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်စာဝှက်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ Vaults များသည် Databases ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သောဖိုင်များဖြစ်ပြီး၎င်းသည် local file system, Dropbox, Google Drive သို့မဟုတ် (OwnCloud သို့မဟုတ် Nextcloud ကဲ့သို့သော) WebDAV ပါသော ၀ န်ဆောင်မှုကဲ့သို့သောရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးသို့ တင်၍ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် Multiplatform ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သော version ကို 05/2021 ရက်စွဲပါ။ ကြည့်ရှုခြင်း GitHub.
၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် web password manager ဖြစ်သည် generar contraseñas únicas para sitios web, cuentas de correo electrónico, o cualquier otro sitio u aplicación sobre la base de una contraseña maestraeinformación personal y secreta que le proporcionamos. အခြားသောဆင်တူသော web (web) များနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်ကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည် database အတွင်းရှိစကားဝှက်များကိုမသိမ်းဆည်းနိုင်သကဲ့သို့အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများပေါ်တွင်လည်းထပ်တူပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာကျပန်းစကားဝှက်တွေထုတ်လုပ်တာနဲ့သိမ်းဆည်းတာထက်စကားဝှက်တွေကိုတကယ်တွက်တယ်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် Multiplatform ဖြစ်ပြီး၎င်း၏နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သော version ကို ၁၂/၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ။ ကြည့်ရှုခြင်း GitHub.
၎င်းသည်အွန်လိုင်းသိုလှောင်မှု (ဝဘ်) ပါသည့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စကားဝှက်မန်နေဂျာဖြစ်ပြီးဘာသာစကား ၄၀ ကျော်ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ၎င်းကိုကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများ၏နယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုရန်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး၎င်းသည် open source ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်စက်မှမဆိုအထိခိုက်မခံသောဒေတာများကိုမျှဝေရန်လွယ်ကူပြီးလုံခြုံသောနည်းလမ်းကိုပေးသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစီမံခန့်ခွဲတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကအသုံးပြုတဲ့စက်ကိုဘယ်နေရာကမှမထွက်ခွာခင်အဆုံးမှအဆုံးသို့စာဝှက်စနစ်ကိုအသုံးပြုတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် Multiplatform ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သော version ကို 40/05 ရက်စွဲပါ။ ကြည့်ရှုခြင်း GitHub.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အကြောင်း «Gestores de contraseñas»နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယနေ့တွင်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးနှင့်လူသိအများဆုံး အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များ ကိုခေါ် GNU / Linux များ; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » စကားဝှက်စီမံခန့်ခွဲသူများ - GNU / Linux အတွက်မည်သည့်အရာများရရှိနိုင်သနည်း။